Egwuregwu Seychelles na-egbuke egbuke na ndị ọbịa si Romania
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Egwuregwu Seychelles na-egbuke egbuke na ndị ọbịa si Romania
News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Ndị njem si Romania ga -anụ ụtọ ọmarịcha mma na ịma mma nke Seychelles site n'ebe dị anya mgbe ihe nkiri na -enwu enwu nke ebe na -amasị ihe onyonyo telivishọn ha n'October.
A ga -egosi Seychelles n'ihe ngosi a ma ama na PROTV La Măruță nke Romania.
A na -atụ anya ewu ewu nke ihe nkiri a ga -ewelite visibiliti na profaịlụ nke Seychelles.
Ndị na -ekiri ga -enwe nghọta n'ime nri Creole na -atọ ụtọ site na mgbanwe nri na -atọ ụtọ n'etiti onye isi obodo Marcus Freminot na onye na -egosi ihe nkiri.
Ndị ọrụ ụgbọ mmiri sitere na PROTV nke Romania nọ na Seychelles n'oge na -adịbeghị anya, na -ese ihe ngosi nke ebe ọ na -aga - site n'ụsọ osimiri na ihe omume n'èzí gaa na nhọrọ ọdịbendị na ntụrụndụ - nke a ga -egosi na ihe nkiri a ma ama a na -akpọ La Măruță.
Ihe ngosi a, nke PROTV na -agbasa, bụ Cătălin Maruță onye sitere na ezinụlọ ama ama na ama ama nke kpakpando TV si Romania. A na -atụ anya na ewu ewu nke ihe nkiri a ga -ewelite visibiliti na profaịlụ nke Seychelles n'ahịa ahụ ka oge oyi na -amalite na onye ọ bụla na -arọ nrọ maka ụzọ mgbapụ zuru oke n'otu ebe na -ekpo ọkụ yana nke na -akpọ oku dị ka obere agwaetiti Indian Ocean.
Ndị na -ekiri ga -enwe nghọta n'ime nri Creole na -atọ ụtọ site na mgbanwe nri na -atọ ụtọ n'etiti onye isi obodo Marcus Freminot na onye na -egosi ihe nkiri, Andreea Dociu, nke ha na -akwadebe efere ọdịnala site na mba ha.
Chef Freminot na-enye azụ eghe eghe eghe eghe na nri Creole, yana curry ọkụkọ na mango chutney dị ka ihe nkwado ebe onye na-eme ihe nkiri Dociu na-abịa nri dị ụtọ nke ukwuu nke ejiri polenta (ọka ọka), cheese parmesan, anụ ezi na akwa.
A họpụtara nke ọma, efere ga -eme ka ndị njem ahụ mata ihe na -atọ ha ụtọ, mee ka ha gaa Seychelles ka ha nụrụ ụtọ onwe ha ihe ụtọ dị egwu nke ebe a na -aga.
Ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ gakwara njem nlegharị anya nke Mahé, na -ese vidiyo ahụmịhe mpaghara pụrụ iche nke ndị njem nleta na -atụfukarị. Ha gara Trois Frères Distillery na La Plaine Ste André ka ha mụta akụkọ na-atọ ụtọ n'azụ Takamaka Rum nke obodo mepụtara wee banye na-atọ ụtọ ụtọ.
Mba ezumike na Seychelles zuru oke na -enweghị 'hopping island' na PROTV ga -ewetara ndị na -ekiri ha ahụmịhe nke iji ụgbọ elu gaa Praslin na njem oke osimiri n'agwaetiti La Digue dị nso.